Izany indray izao no malaza eny amin’ny CENI eny, sy eny amin’ireo mpanohana kandidà, indrindra fa an' ny laharana 13. Io ankehitriny no ahiana mafy ho tompo-marika amin’ny haihay momba fironana hafahafa amin’ny fizotran’ny valim-pifidianana vonjy maika avoakan’ny Vaomiera Mahaleotena Misahana ny Fifidianana, na ny CENI.
Orinasa israeliana mahaleotena havanana indrindra amin’ny resaka fitsikilovana informatika, na ny momba ny aterineto, ny Black Cube. Manerantany ny lazany eo amin’io sehatra io. Saika laza ratsy hatrany anefa : voambara fa nanova valim-pifidianana maro taty Afrika izy io, toy ny tany Kenya sy Nizeria.
Fantatra koa ankehitriny fa ilay miliaridera malaza amin’ny fanaovana hosoka amin’ny fadintseranana Mbola Rajaonah, tompon’ny orinasa Transit Tafaray any Toamasina, no nividy tamin’ny orinasa Black Cube « logiciel » mpandainga amin’ny vidiny lafo de lafo 1.200.000 euros ity dimy volana lasa izay. Io ilay « logiciel menteur » izay kendrena indrindra handiso ny voka-pifidianana eto Madagasikara ankehitriny.
Marihina fa efa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2006 no nanomboka fantatra ny fisian'ny fampiasana ny fitaovana informatika hanodinana ny voka-pifidianana. Tamin'izany no nisian'ny orinasa malagasy Digit.mg, izay fananan'ny vadin'ny minisitry ny Toe-karena Hajanirina Rasolonjatovo, izay sady talen'ny fampielezan-kevitry ny kandidà Marc Ravalomanana rahateo. Nandalo tao amin'ny Digit.mg avokoa ny antontan'isa rehetra momba ny voka-pifidianana vao raisin'ny ministeran'ny Atitany ary dia nanana toerana tao amin'ny trano boriborin'ny Atitany mihintsy izy ity tamin'izany.
Marihina ihany koa fa mpanolotsaina manokan’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sady isan’ireo mpamatsy vola mavitrika ny antoko teo amin’ny fitondrana HVM ingahy Mbola Rajaonah. Nandritra ity fifidianana ity anefa dia Marc Ravalomanana no tohanan’ity mpanefoefo ity. Izy ve izany no isan’ny tsipi-panohizana manambatra ireto kandidà faharoa sy fahatelo eo amin’ny voka-pifidianana vonjy maika ireto ? Sa satria sarotra ny hijapy an'ny kandidà laharana faha-13 izay manizingizina ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny praograman'asany sy ny IEM, ka aleo Marc Ravalomanana izay efa indroa nomelohin'ny fitsarana no tohanana mafy, sitrany hahay hiaro amin'ny raharaham-pitsarana raha toa ka tafaverina eo amin'ny fitondrana?